News-saareyaasha & Shirkado cusub | Shiinaha News Factory
Dhalaalaya istaag kiish
Window istaag kiish
Matte istaag kiish
Kraft warqad kiish
warqad Brown kiish-bireed
boorso suuqa kala Paper
warqad White kiish-bireed
Side Gusset beddelo
Saddex Side Khatimidii beddelo
Child beddelo Cadayn
boorso caag jiinyeer
boorso Baakadaha caaga
Dhowr fursadaha of bacaha warqad Kraft
Ma waxaad doorashada bacaha xirmo laga saaro? Waxaa laga yaabaa in aad ka fiirsan kartaa Kraft bacaha Baakadaha warqad, warqad Kraft bacaha is-dhagixiina sidoo kale loo yaqaan bacaha jiinyeer warqad nidaamka, ay non-sun ah, Faylasha, qashin-free, si waafaqsan heerka deegaanka qaran, xoog sare, enviro sare .. .
Faa'iidada of bacaha guri hoose
Guud ahaan, Bacda Baakadaha kooban ayaa nolosheena galay ku dhowaad, suuqa ugu badan ee isticmaalka bacaha kooban baakooyinka hoose guri ee hadda. Sidaas waa maxay faa'iidooyinka of this bacaha fiican Baakadaha hoose guri? Waxaan kuu sheegi doonaa qodobbada soo socda oo ku saabsan packin guri hoose ...
bacda seal saddex dhinac
Maxaa loola jeedaa dhinaca saddex boorso, waa in bac la welded saddex kooxood. Mid ka mid ah kooxda sii joogi doonaa furan wax soo saarka. Sidaas, macaamiisha gelin karaa waxyaabaha ay bacaha, ka dibna ay isticmaalaan quwad kulaylka in la shaabadeeyo furitaanka bacaha. Marar badan, waxaa loo baahan yahay Baakadaha vacuum kiish saddex dhinac ...
Istaag Doypack ilaa kiish
Istaag boorso weyn loo isticmaalaa in our nolol maalmeedka. Waxaan ku arki kartaa cunto badan sida qaxwada, nuts, cunto fudud, jery hilibka lo'da, awood protein, bur buuxiyey by istaag boorso la jiinyeer. Maanta, waxaynu u qori this article inay soo bandhigto istaag boorso. First aan ka hadlo waxyaabaha la. Nooca koowaad waa Kraft u istaagaan pou ...
bacda gusset kooxda
bacaha gusset Side waxaa lagu helo caan codsiyada badan oo kala duwan oo warshadaha. Ay wax raagaya caawisaa kordhiyo nolosha shelf by hubinta sheyga ayaa weli si ammaan ah laga shaabadeeyey laba iyo in laga ilaaliyo. bacaha Our kooxda gusset waxaa ugu ballaaran loo isticmaalo baakooyinka fudud iyo cuntada la qalajiyey sida nuts, ...
bean Coffee waa wax la cabbo caadi ah nolol maalmeedka. Dadka jecel yihiin in ay kafeega cabbo marka shaqada daal, dad gaar ah, kuwaas oo ka yimid dalka reer galbeedka. boorso Coffee loo isticmaalaa in lagu sii waqti dheer bean kafeega. Maanta, waxaan soo bandhigi doonaa baakadaha bean kafeega. wax First, aan ka hadlo waxyaabaha la. Waxaa jira laba xigaalkiisa ...
Cinwaankaaga: Room 266, Dabaqa 2aad, QingShuiWan, No. 7-1 TangKeng Road, LongGang, Shenzhen, 518115, Shiinaha
Copyright © 2019 Xuquuqda daabacaadu way xifdisan.
Guide - Products Featured- Sitemap - Mobile Site
Istaag Up Baako beddelo , Clear caaga istaag Up koley , Istaag Up Dambiisha beddelo , oo cad cad istaag Up koley , Istaag Up Baakada caaga beddelo , Dambiisha Kraft Paper Resealable ,